Kudzokera kune yangu Mac basa inonyangarika kubva ku macOS Mojave | Ndinobva mac
Kudzokera kune yangu Mac chimiro inonyangarika kubva ku macOS Mojave
Sezvo mazuva anoenda, vashandisi avo vakashinga kuisa iyo yekutanga beta ye macOS Mojave, tiri kutarisa ndiwo mabasa matsva uye akanyangarika yakazara yeiyo nyowani vhezheni ye macOS, vhezheni inosvika mukupedzisira vhezheni kupera kwaGunyana, mazuva mashoma mushure mekutanga, zvakare yeiyo vhezheni yekupedzisira, yeIOS 12.
Mazuva mashoma apfuura, takaburitsa chinyorwa chatakakuzivisa nezvacho imwe yesarudzo dzakabviswa naApple kubva ku macOS Mojave, iro basa rinotibvumidza isu gadzira Twitter uye Facebook maakaundi pachikwata chedu kuti tikwanise kukurumidza kugovera zvatiri kuda natively kuburikidza nekushandisa, tisingafanirwe kuzviita kubva kubhurawuza. Zvinotaridza kuti handiyo yega.
Imwe sarudzo yakanyangarika zvakare nekutanga beta yekutanga ye macOS Mojave, tinoiwana iri iyo Kudzokera kuMy Mac chinhu, basa iro nekuda kwekuderera kwaro (nekuda kwekushomeka kwekushandisa) rinoita kunge rakabviswa zvachose kubva kunotevera vhezheni ye macOS. Izvo zvakare zvinoita kuti, senge nzira dzekugovana pasocial network, ivo vakangonyangarika kubva kune yekutanga beta.
Iyo Kudzokera kuMy Mac chimiro inobvumira vashandisi veMac batanidza zvakachengeteka pamusoro peInternet kune imwe Mac. Iri basa, rinova chikamu cheICloud, rinoshandiswa zvese kugovana mafaera uye iyo terminal screen. Kunyangwe iri basa richitipa mhinduro inoshamisa pabepa, asi mashandiro acho haana kumbobvira ave sezvaidiwa, uye zvinoita sekunge Apple haina kuda kutambisa nguva kuivandudza.
Nhasi, tinogona kuwana mamwe masevhisi anotipa iwo mamwe mabasa asi nenzira yehunyanzvi uye yakagadziridzwa, senge TeamViewer. Mumazuva mashoma anotevera, isu ticharamba tichitarisa pane macOS Mojave sarudzo dzekumisikidza kuti tione kana isu tichiwana zvitsva maficha kana zvimwe zveaive atovepo, zvanyangarika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » MacOS Mojave » Kudzokera kune yangu Mac chimiro inonyangarika kubva ku macOS Mojave
Gaston Aquiles Paz Pozo akadaro
Sarudzo yekugovana mafaera pamusoro pewebhu sekunge iwe wanga uri padandemutande rako remunharaunda haina timu yekutarisisa, zvirinyore neizvozvo nyore. Kunyangwe ichigara ichida kubatana neakakwira kurodha pasi uye kurodha kumhanya.
Pindura Gaston Aquiles Paz Pozo
Apple inobvunza vanogadzira kuti vaendese Safari yekuwedzera mune iyo bhurawuza pachayo
Maitiro ekuwedzera Waze kana Google Mepu kuCarPlay